Home / How to Work from Home Productively
🔸 လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြသူတိုင်း အများစု လိုလို ယခုလက်ရှိ Covid 19 ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု အခြေအနေကြောင့် Social Distance လုပ်ဖို့ရာ အိမ်မှာသာနေရင်း အလုပ်လုပ်နေကြရမှာပါ။
🔸လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ သာမန်ဆိုပေမယ့် ရုတ်တရက် အိမ်မှာပဲ အလုပ်တာဝန်တွေကို ရုံးချိန်အတိုင်း လုပ်ဖို့ ဆိုတာကျ ကျွန်တော်တို့အတွက် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်လို့နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာလို အာရုံစိုက်လို့ မရတာမျိုး၊ အလုပ်တွေ မပြီးမစီးဖြစ်နေတာမျိုး၊ တနေကုန် ထိုင် အလုပ်လုပ်နေပေမယ့် ရုံးမှာထက် အလုပ်တွေ ပိုများပြီး စုပုံနေမိတာမျိုးတွေ ကြုံလာရမှာပါ။
🔸 ပြောရမယ်ဆိုရင် work from home ရတာ ဘယ်လိုမှ Productive မဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။
ဒီတော့ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာအတိုင်း Productive ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ကြမလဲ ? နှစ်မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးဗျ။
☑️အလုပ်လုပ်ဖို့ နေရာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားပါ။
စာကြည့်စားပွဲ လိုမျိုး နေရာပေါ့။ အာရုံစူးစိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ နေရာတစ်ခု သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အလုပ်လုပ်ဖို့ရာ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အလုပ်မှာ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်နေစေလောက်မယ့် Home office လို နေရာမျိုး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားပြီး အလုပ်လုပ်ပါ။ မိသားစု တွေ TV ကြည့်နေကြတဲ့ ဧည့်ခန်းလိုမျိုး နေရာမျိုး၊ မှာ အလုပ်လုပ်နေရင်တော့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
☑️ ရုံးတက်ရတဲ့နေ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
အလုပ်ပြီးရင်ပြီးတာပဲကွာ ..Work from Home ကာလမှာ တစ်ညလုံး အလုပ်လုပ်ပြီး တစ်နေ့လုံး အိပ်တယ် ဆိုတဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ကြီးက Freelancer တစ်ယောက်အတွက်တော့ ကိစ္စ သိပ်မရှိလှပေမယ့် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ Team နဲ့ အလုပ်လုပ် နေရသူဖို့ကတော့ အဆင်ပြေနိုင်ခြေ နည်းပါးပါတယ်။ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ မနက်စောစော ထ ရုံးသွားဖို့ ပြင် ကားစောင့် စတဲ့ အပို ကြာချိန်တွေ သင့်မှာ မရှိတော့တဲ့အတွက် အိပ်ယာထဲမှာ ၉ နာရီ မထိုးခင်ထိ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ချိန် ၉ နာရီမှာတော့ သင့် အလုပ်စားပွဲ ရှေ့ ရောက်နေပါစေ။ ဒါမှသာ ကိုယ်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်ရော ကိုယ့် Work From Home စနစ် အတွက်ပါ အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်လာမှာပါ။
☑️ အလုပ်တာဝန်တွေအတွက် အချိန်ကို Plan ချပါ။
9am to 12am ပြီးရင် Lunch Break စသည်ဖြင့်က ရုံးမှာဆိုရင်တော့ နေ့စဉ် ထုံးစံအတိုင်း မသိလိုက်ဘာသာ လုပ်ကိုင်နေမိပေမယ့် အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်နေရင်းကျ ဒီလို အချိန်တကျ လုပ်ဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ပါတယ်ဗျ။ Work from Home စနစ်ဆိုတာက တကယ်တမ်း Flexible Hours ပိုရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က ဥပမာအားဖြင့် တစ်နေ့ ၈ နာရီ အလုပ်လုပ်မယ်ဆို3နာရီဆက်တိုက်လုပ် ဘယ်လို Task တွေ ပြီးအောင်လုပ်ပြီးရင်တော့ Break Time နား နောက် သုံးနာရီ ပြီးရင် Break Time ထပ်နား နောက် နှစ်နာရီ ဆက်လုပ် အလုပ်သိမ်းလိုက် စသည်ဖြင့်ပေါ့ ကိုယ့်အလုပ်ချိန်နဲ့ တစ်နေ့တာ လုပ်ရမယ့် Task တွေကို ကိုယ်တိုင် Plan ချပြီး ဒီလိုအချိန်တွင်းမှာ အာရုံမလွင့်ဘဲ အလုပ်ကိုသာ မပြီး ပြီးအောင် လုပ်ဖို့ ကိုယ်တိုင် တွန်းအားပေးနေဖို့တော့လိုပါတယ်။
☑️ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေသာ အာရုံစိုက်တတ်ပါစေ။
Work from Home ရတဲ့အခါ အလုပ်မပြီးဘူးဆိုတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတစ်ခုက အိမ်မှာ ကိုယ့် ပစ္စည်းတွေ များနေတာပါပဲ။ အိပ်ယာဘေးက ဖတ်လက်စ စာအုပ်၊ TV မှာ လာနေတဲ့ ရုပ်ရှင် က စလို့ပေါ့။ သီချင်းဖွင့်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်သူဆိုလည်း ဖုန်းထဲက သီချင်းရွေးရင်း You Tube ထဲက ပြန်ထွက်မရတော့တာမျိုး၊ Facebook နဲ့ Messenger က Noti တွေ တတောင်တောင်မြည်နေတာကို ချက်ချင်း ထဖတ်လိုက်တာမျိုးတွေကစလို့နောက်ဆုံး မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားထိုင်ပြောနေမိတာမျိုးတွေ ဖြစ်လို့ နေကြမှာပါ။
ဒီတော့ ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာမျိုး ရှိခဲ့ရင် ပစ္စည်းဆိုရင် ရွှေ့ပစ်ဖယ်ပစ်ပါ။ Social Media App ကို အလုပ်ကိစ္စအတွက် မဖြစ်မနေ သုံးရမယ်ဆို မလိုအပ်တာတွေကို Noti off သို့မဟုတ် Log out လုပ်ထားပါ။ အလုပ်မှာလည်း ဂိမ်းလေးဆော့လိုက် ဖေ့ဘုတ်လေး သုံးလိုက်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေကျဆိုရင်တော့ အိမ်မှာတော့ ဒီ အကျင့်ကို စွန့်လွတ်လိုက်ပါ။ Work from Home နေတာပဲလေ ဆိုတဲ့အသိက ဘာမဆို လိုအပ်တာထက် ပိုအချိန်ယူနေမိတာ ကိုယ်တိုင် သတိထားမိပါစေ။
ပုံမှန် အလုပ်ချိန်မှာမပြီးလဲ ငါ နောက်ကျမှ အိပ်ပြီး လုပ်လို့ရတာပဲ။ မနက်စောစောထပြီး လုပ်လိုက်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးက Work from Home စနစ်မှာ ဘယ်တော့မှ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ အလုပ်ကိစ္စ အပြင် အိမ်ကိစ္စ ဝေယျာဝစ္စတွေကြားမှာ အလုပ်ကိုသာ အာရုံစိုက်လုပ်နေရတာမို့ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ တစ်နေ့တာ တာဝန်တွေကို တစ်နေ့ ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ တကယ်တမ်းကျ Work from Home ဆိုတဲ့ Flexible Hour အတွင်းမှာ အလုပ်များလေ Productive ဖြစ်လေ လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။
🔸 ဆိုတော့ Work From Home ဆိုတဲ့ အိမ်ကနေပဲ အလုပ်ထိုင်လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ ကြားရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိသလောက် လက်တွေ့မှာတောင် စည်းစနစ်တကျ ဖြစ်ဖို့ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
🔸 ကိုယ့်အိမ်မှာ စိတ်ရော လူပါ သက်တောင့်သက်သာ အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်တဲ့ အခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့သာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက စိတ်အတိုင်း၊ အချိန်အတိုင်း၊ တာဝန်တွေ အတိုင်း ကျေပွန်အောင် ကြိုးစားနိုင်ရင် Work From Home ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အတွက်ရော လက်ရှိ ကျန်းမာရေ အခက်အခဲ အခြေအနေအတွက်ရော ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီတော့ …. အားလုံး အကျိုးရှိစွာ Work from Home စနစ်နဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ ကျေပွန်နိုင်ကြခြင်းဖြင့် လက်ရှိ အခက်အခဲ အခြေအနေကြီးကို ကျွန်တော်တို့ အတူတူ ကျော်လွှားကြပါစို့။